Xuska Munaasibada sanadguuradii 20aad mar la aas-aasay Puntland oo Caawa garawe logu qabanayo. | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Xuska Munaasibada sanadguuradii 20aad mar la aas-aasay Puntland oo Caawa garawe logu qabanayo.
Radio Gaalkacyo:-1Augosto 1998 ayey ahayd markii dhidibada loo taagay Dawlada puntland ka dib wadatashiyo ay yeesheen dadka degaanka waxaana sanad kasta hadaa la qabtaa dabaal dagyo lagu xusayo maalintaasi iyadoona inta badan Gobolada Puntland ay ka dhacaan dabaa dagyadaasi.
Hadaba 1-dii Bishaan ayaa qorshuhu ahaa in ay Magalada Garoowe ka dhacdo munaasabada 20-guuradii ka soo wareegtay Aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland balse ay dib udhac ayaa ku yimid ka dib markii uu Khilaaf soo kala dhexgalay Wafdigii uu hogaaminayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ee soo gaaray magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland iyo Madaxda Puntland ayaa sabab u noqday in munaasabadaas ay qabsoomi weyso balse ugu dambeyn xal laga gaarey.
Khilaafka soo kala dhex-galay Madaxda Puntland iyo Wafdiga Ra’isulwasaaraha ayaa Salka ku hayey ka dib markii Ra’isulwasaaruhu uu ka baaqday Dhagax dhiga degaan Xeebeedka Garacad ee Gobolka Mudug.
Shalay ayey ahayd markii ay Wadahadalo mudo Saacado ah qaatay ayaa fududeeyey in Shirka Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya oo shaki la gelinaayey uu ka qabsoomo Garoowe,iyada oo sidoo kale la’isku raacay in 3-da Bishaan Agoosto oo Caawa ah lagu qabto munaasabadaas Magalada Garoowe.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Xubnaha Golaha Wasiirada ee ku sugan Magaalda Garoowe ayaa ka qeyb geli doona munaasabadaas,iyada oo qaban qaabadii u dambeysay ee munaasabada ay iminka ka socoto Magalada Garoowe.